Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles Enwetala onye ọsụ ụzọ njem na Myriam St.Ange
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism
Ezinaụlọ St.Ange gbakọtara na njem nlegharị anya nke La Digue n'ime ụbọchị abụọ gara aga ka ọ nọrọ n'akụkụ nwanne ha nwanyị.
Ọ nwụrụ ka ụmụ ya nwoke, ụmụnne ya nwoke, na ndị ezinụlọ ya gbara ya gburugburu nke bụ nke ọma.
Myriam na ụmụ ya nwoke abụọ gbanwere ụlọ ezinụlọ La Digue Island St.Ange ka ọ bụrụ ụlọ ezumike ezinụlọ Chateau St.Cloud.
Myriam St.Ange na ụmụ ya nwoke abụọ Carl na Sydney Mills gbanwere ụlọ ezinụlọ La Digue Island St.Ange, Chateau St.Cloud na Seychelles, ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ ka ha na -ejigide njirimara oge ọchịchị nke ụlọ ihe atụ.
Myriam na ụmụ ya nwoke mere ihe ịga nke ọma ka ọ na -aga n'ihu na -elekwasị anya na mmepe njem nke agwaetiti ndị a.
Ezinụlọ St.Ange gbakọtara na njem nlegharị anya nke La Digue maka ụbọchị abụọ gara aga ka ọ nọ n'akụkụ nwanne ha nwanyị, ọ nwụrụ ka ụmụ ya nwoke, ụmụnne ya nwoke, na ndị ezinụlọ ya gbara ya gburugburu na nke a bụ nke ọma.
Myriam St.Ange bụ nwanne Alain St.Ange, onye bụbu Mịnịsta na -ahụ maka njem, ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri na mmiri nke. ndị Seychelles, na ọtụtụ n'ime ndị ezinụlọ ya bụ ndị na -eme njem nlegharị anya nke ọma na Seychelles.